» देश बासिको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ! कोरोनाको उपचार खर्च परिवारले तिर्न नसके सरकारले ब्योहोर्छ, देश बासिको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ! कोरोनाको उपचार खर्च परिवारले तिर्न नसके सरकारले ब्योहोर्छ, – हाम्रो खबर
देश बासिको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ! कोरोनाको उपचार खर्च परिवारले तिर्न नसके सरकारले ब्योहोर्छ,
2020, October 23rd, Friday
admin 1064 Views
कार्तिक ७ काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज देशवासीका नाममा संवोधन गरेका छन् । यस संवोधनमा सरकारमाथि पछिल्लो कोरोना संक्रमितको उपचार खर्चलाई लिएर भएको निर्णयको आलोचनामा प्रधानमन्त्री केन्द्रीत भएका छन् । उनले संक्रमितको उपचार खर्च परिवारले नव्यहोरो वा अस्पतालले पनि नव्यहोरे सरकारले व्यहोेर्ने बताए ।
केही दिन देखि सरकारले संक्रमित आफैले उपचार खर्च व्यहोर्नु पर्ने बताएसगँै संक्रमितहरुलाई सरकारी अस्प्तालले नै लाखौँ धरौटी नराखी उपचार गर्न मानिरहेको छैन ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको संवोधनमा स्पष्ट उल्लेख छैन । यद्यपि, विपत्तितमा जनताको रक्षा गर्ने सरकारको दायित्व भएकोमा उनले जोड दिएका छन् । विपत्तिमा सरकारले बाँच्ने बाँच नसक्ने जेसुकै गर भने जस्तो अफवाह फैलाईएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे ।
उनले दँशै सामान्य रुपमा फजुल खर्च नगरी मनाउन अपील गर्दै प्रधानमन्त्री निवासमा टिकाको कार्यक्रम नराखिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय टिप्प्णी भईरहेको भारतीय जासुसी संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयललाई सरकारी निवासमा भेटेको बिषयमा भने कुनै विषय उल्लेख गरेनन् । यसमा विपक्षी र पार्टी भित्रैबाट जवाफ माग भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको संवोधनको पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् ।
सामान्यतया यस्ता राष्ट्रिय विपत्तिको बेला अफवाहका तुवाँलो बाक्लै लाग्ने गर्दछन् । गत बर्ष चैत ११ गते पहिलोचोटी लकडाउन गरेदेखि हालसम्मै जनतालाई भयभित र असहाय महसुस गराउने प्रकृतिका थुप्रै अफवाहहरु चलेका छन् । सक्रिय संक्रमितको एउटा मात्रै केस हुँदा होस् वा अहिले एकैदिनमा ५ हजारभन्दा बढी सक्रिय केस पहिचान भएको क्षणमा होस्, अफवाहको प्रकृति करिबकरिब उस्तै रहेको देखिन्छ । तर आम देशबासीको सहयोगका कारण समयक्रममा त्यस्ता तुवाँलोका तहहरु क्रमशः फाटेका छन् । जनताको यही सकारात्मक सहयोगका कारण यस महामारीमा मृत्युदर अझै ०।६ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । निको हुने दर क्रमशः बढ्दै छ ।
कठीन घडीमा नै परिवार, नातागोता, छरछिमेकी र जनप्रतिनिधिहरुको सहयोगको महत्व हुन्छ । पीडाका घाउमा पारस्परिक सहयोग र एकताको भावनाबाट मल्हम लगाउन सकिन्छ । आफैं संक्रमित हुँदा होस् वा परिवारका कोही, त्यसको मनोवैज्ञानिक असर गहिरो हुन्छ । संक्रमित विरामीहरु संक्रमणले सिर्जना गरेको भयबाट अपहेलित हुने र उपचार नपाउनेजस्तो स्थिति हुनुहुँदैन । अत्यन्त सावधानी र आत्मीयताका साथ गरिने सहयोगी व्यवहारले विरामीहरुको मनोबल उच्च पार्न र छिटो निको बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।
यस महामारीको संक्रमणबाट आफू जोगिनु र आफन्तलाई पनि जोगाउनु अहिलेको प्राथमिक काम हो ।
यस्तै अप्ठ्यारोमा पनि हामी नेपालीले साहस र सहजताका साथ दुःखको सामना गर्ने गरेका छौं । यस महामारीले पनि अहिले हाम्रो परीक्षा लिइरहेको छ ।
बडादशैं २०७७ को सबैमा हार्दिक शुभकामना,।धन्यवाद ।